“Madaxwayne Siilaanyo Afkiisa Waxaan Ka Hayaa Inuu Yidhi Muuse Biixi Ila SNM Dhib Lay Dabo Dhigay Ayuu Ahaa…Xildhibaan Gacan |
“Madaxwayne Siilaanyo Afkiisa Waxaan Ka Hayaa Inuu Yidhi Muuse Biixi Ila SNM Dhib Lay Dabo Dhigay Ayuu Ahaa…Xildhibaan Gacan
Hargaysa(GNN)Xildhibaan Maxamed Muuse Obsiiye(Gacan) oo ka tirsan xildhibaanada golaha Guurtida somaliland ayaa ka hadlay Xaalada Xisbiga Kulmiye ka dhex taagan isaga oo madaxwaynaha u soo jeediyay si aanu xisbiga kulmiye u raacin dhabadii kulmiye inuu Dhex u noqda Musharaxiinta Cabanaya.
Obsiiye waxa uu madaxwaynaha somaliland Dib u Xasuusiyay Hadalo uu Khilaafkii soo kala dhex galay madaxwayne siilaanyo iyo muuse biixi ee guurtidu u Gar Naqday ka hadlay,waxaana uu ka shekeeyay hadal uu siilaanyo muuse kaga cawday oo ahaa inaanu Dhib ku hayay ilaa ururkii SNM iyo ilaa maanta.
Xildhibaanka oo Maanta Warbaahinta la hadlay ayaa sheegay hadii uu siilaanyo Xisbiga Kulmiye Dhex u Noqon Maayo inuu ku Khamaaray Xisbigii Ay Rag Badan wakhtigooda u lumiyeen waxaana uu yidhi.
“Burburka Xisbiga kulmiye dalka ayuu dhibaato ku yahay siyaasada Guud iyo tan Gudahaba wax badan ayuu yeelayaa madaxwaynaha iyo inta hogaaminaysa waxaan ugu baaqayaa in xisbiga lootudho dalkana lootudho,dibna loo uruuriyo xisbiga si dhismaha xisbiga Kulmiye,si dimuq-raadi ahna loogu tartamo xisbiga dhexdiisa waynu soo dhaafnay Digtaateeri wakhti umada loo Han-jabo lana cabudhiyo,dal maanta Horumat Hiigsanaya ayaynu nahee Halaga taliyo jiritaanka Xisbiga kulmiye.
Intaas waxa uu ku daray xildhibaanku isaga oo hadalkiisa siiwata waxaana uu yidhi.”Madaxwaynaha somaliland waxa u qurux badan inuu dadka tartan siiyo,lakiin maaha inuu cid uu iska tageero isna taas ayaa u fiican xisbigana u fiican tariikh wanaagsana ka reebi doonta,Lakiin Laba Su’aalood ayaa Meesha yaala madaxwaynaha somaliland wuu Khamaaray maanta,Anigu waxaan ogaa Maalintuu uu yidhi muuse waan tartamayaa oo siilaanyo ayaan ka dhinac tartamayaa in muuse dibada loo Tuuray.
Xildhibaan Axmed Gacan waxa uu madaxwaynaha somaliland dib u xasuusiyay khilaafkii isaga iyo muuse biixi soo kala dhex galay ee sababta u ahaa in Guurtidu ka Gar Noqdo weedho Xasuus ku lehna uu ku yidhi Madaxwaynahu Guurtida waxaana uu yidhi.
“Madaxwaynaha iyo Muue Biixi Guurtida ayay u soo gudbiyeen Waraaq waanu u gar Naqnay,afkiisa siilaanyo waxaan ka hayaa inuu yidhi qof I dhiba ilaa halgankii SNM ku dhahoow qofka somaliland iigu dhibka Badani waa Muuse Biixi,waligayna intaan noolahay agtayda isa soo taagi maayo,maantana silama Filaan ah ayuu u raacay,Labada Garabna Maalintaas ayay Bilaabmeen.
waxa uu ku sheegay isaga oo hadalkiisa siiwata waxaana uu yidhi.”Muuse hadii uu musharaxba ku guulaysto hadii laga helo ma Aqbalayaa Oo sidii siilaanyo toddobaatanka Cod makaga Tagaya danta qaranka,yaydu Xayawaanka ayay ka mid tahay,abaan duule ayay leedahay oo waa ka ugu horeeya,meesha xirsi ayaa ka abaan duule ahaa marka uu xirsi meesha ka tagayna kooxdiisi way Raacday.